19 September 2021 သတင်း
နွေဦးတော်လှန်ရေး၏ အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လျက်ရှိပြီး ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သမိုင်းဝင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု ဖြစ်သည့် အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (Civil Disobedience Movement - CDM) နှင့်ပတ်သက်သော အစီရင်ခံစာကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ pdf ဖိုင်ရယူရန် နှိပ်ပါ။
18 September 2021 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://nugmyanmar.orgသတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၅/၂၀၂၁)၁၇ စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၁ခုနှစ်၁။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၄/၂၀၂၁) ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက စစ်ကောင်စီအား ခုခံတွန်းလှန်မည့် ပြည်သူ့တော်လှန်ရေး စတင်ခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြထားရာ စစ်ကောင်စီသည် နိုင်ငံရေးအရငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းမှုကို လုံးဝစိတ်မဝင်စားပဲ အာဏာဆက်လက် တည်မြဲရေး အတွက် အကြမ်းဖက်မှုများကို ဆက်လက်ကျူးလွန်နေကြောင်း၊ NUG က ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်နှင့် လုံခြုံမှုကို အကာအကွယ်ပေးရန် တာဝန်ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို အသိအမှတ်ပြုသော်လည်း နိုင်ငံတကာအသိုင်းကိုသာ အားကိုးနေ၍ မရပဲ တမျိုးသားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြင့် အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုကို အဆုံးသတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူများက ခုခံရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး ခုခံတွန်းလှန်မှုများ စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ကလည်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအင်အားစုများနှင့် အတူလက်တွဲ၍ ခုခံတွန်းလှန်သွားရန် ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူတရပ်လုံးက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ပါရှိပါသည်။၂။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ(EAOs)နှင့် ပူးပေါင်းကာ ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံရေးအစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်း၍ CDM ဝင်ကာ ပြည်သူ့ရင်ခွင် ခိုလှုံလာမည့် တပ်မတော်သားနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ကြိုဆိုလက်ခံနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ပြည်သူ့ရင်ခွင် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ https://facebook.com/peoplesembrace နှင့် telegram Channel - https://t.me/MyanmarPeople တို့ကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ၃။ တရားမဝင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ရောင်းချရန် စီစဉ်နေသည့် ပြည်ပနိုင်ငံများရှိ မြန်မာနိုင်ငံပိုင် သံရုံးမြေနှင့် အဆောက်အဦများအား ဝယ်ယူခြင်းသည် တရားဝင်မှုမရှိသောကြောင့် ဝယ်ယူခြင်း အလျဉ်းမပြုကြရန် အထူးသတိပေး တားမြစ်သည့် ကြေညာချက်အမှတ် (၁၁/၂၀၂၁) ကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု အမည်ပေါက်သော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ နိုင်ငံပိုင်မြေ၊ အဆောက်အဦ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအရပ်ရပ်တို့၏ မူရင်းပိုင်ရှင်သည် နိုင်ငံတော်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော နိုင်ငံသားပြည်သူများသာ ဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်သူလူထုအားကိုယ်စားပြုမှု အလျဉ်းမရှိသော အကြမ်းဖက်စစ် ကောင်စီနှင့် ယင်း၏လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အဆိုပါ မြေ၊ ဆောက်အဦနှင့် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု များအား ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်၊ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်၊ ရောင်းချပိုင်ခွင့် အလျင်းမရှိကြောင်း၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် ပြည်ပနိုင်ငံများရှိ မြန်မာနိုင်ငံပိုင် သံရုံးမြေနှင့် အဆောက်အဦများအား အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်စေ၊ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းဖြစ်စေ၊ ရောင်းချရန် ကြိုးပမ်းမှု မှန်သမျှသည် တရားဝင်မှု လုံးဝမရှိကြောင်းကြေငြာ လိုက်သည်။ ထိုသို့ရောင်းဝယ်မှုများကို လုံးဝမလုပ်ရန်လည်း အထူးသတိပေး တားမြစ်လိုက်သည်။ ဤသို့သတိပေးတားမြစ်ထားသည့်ကြားမှ အရောင်းအဝယ်ပြုခဲ့သည်ရှိသော် စစ်ကောင်စီဘက်မှ တာဝန်ခံရောင်းသူကို သော်လည်းကောင်း၊ လက်ခံဝယ်ယူသူကိုလည်းကောင်း၊ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံးကိုလည်းကောင်း သင့်တင့်လျောက်ပတ်သည့် အချိန်တွင် သင့်လျော်သော စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်တရားရုံးတော်၌ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအနေဖြင့် ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ခွင့် အကြွင်းမဲ့ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည် စသည့်အချက်များ ပါရှိပါသည်။ ၄။ (၇၅) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ ပိတ်ပွဲအစည်းအဝေး နှင့် (၇၆) ကြိမ်မြောက်၊ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ ဖွင့်ပွဲ နှင့် ပထမအကြိမ် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးများသို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဉီးကျော်မိုးထွန်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (၇၆)ကြိမ်မြောက်၊ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ ပထမအကြိမ် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး ကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ၊ အစည်းအဝေးကို (၇၆)ကြိမ်မြောက် အထွေထွေညီလာခံဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Abdulla Shahid မှ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်၊ အထွေထွေညီလာခံ၏ အရည်အချင်းစစ် ကော်မတီ (Credentials Committee) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ အရည်အချင်းစစ် ကော်မတီ တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအဖြစ် ဘဟားမားစ်၊ ဘူတန်၊ ချီလီ၊ တရုတ်၊ ရုရှား၊ ဆီရာလွန်၊ နမီးဘီးယား၊ ဆွီဒင်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တို့ပါဝင်သည်။၅။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ RadioNUG အစီအစဉ်ကို နေ့စဉ် နံနက် ၈ နာရီ လှိုင်းတို ၁၆ မီတာ (၁၇.၇၁) မက်ဂါဟက်ဇ် တွင် တစ်ကြိမ်၊ ည ၈ နာရီ လှိုင်းတို ၂၅ မီတာ (၁၂.၀၀) မက်ဂါဟက်ဇ်တွင် တစ်ကြိမ် ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိသလို၊ နေ့စဉ်သတင်းရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုလဲ ည ၈ နာရီခွဲအချိန်တွင် NUG , CRPH , RadioNUG နှင့် PVTV တို့၏လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာများမှ ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက စစ်ရေးသတင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် ပြည်ထဲရေးနှှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပြည်သူလူထု၏ခုခံကာကွယ်စစ် သတင်းအချက်အလက်များကို နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ ၆။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုချက်များအရ အရွယ်ရောက်ပြီးသော ကလေးငယ်များ လွတ်လပ်စွာ အခမဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ (၂၀၀၉)က အသက် ၆ နှစ်နှင့် ၁၄ နှစ်အကြား ကလေးငယ်များသည် ၎င်းတို့၏ အသက်အရွယ်နှင့်ညီမျှသော အခြေခံပညာသင်ကြားပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ဒေသစွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခိုလှုံလာသော ကလေးငယ်များကို ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဟု မီဇိုရမ်အစိုးရ ကျောင်းပညာရေးဒါရိုက်တာအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ် လွန်စွာကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် အပ်ပါသည်။
13 September 2021 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://nugmyanmar.orgသတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၄/၂၀၂၁)၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက စစ်ကောင်စီအား ခုခံတွန်းလှန်မည့် ပြည်သူ့တော်လှန်ရေး စတင်ကြောင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့စွဲဖြင့် ကြေညာခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်အား အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာ၍ အစိုးရရုံးများအား ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်ထားကြောင်းနှင့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကြေညာချက်ကို ပြည်သူများက တခဲနက် ကြိုဆိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့် စစ်ကောင်စီသည် ခုနှစ်လအတွင်း ပြည်သူလူထုအား ဖိနှိပ်ရက်စက်မှုများစွာ ကျူးလွန်ခဲ့သည့်အပြင် မတည်ငြိမ်မှုများနှင့်အတူ စီးပွားရေး၊ လူသားချင်းစာနာမှုနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြပ်အတည်း ပေါင်းများစွာ ကြုံတွေ့စေခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှု ပေါ်ပေါက်ပြီး မကြာခင်မှာပင် သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူလူထုသည် အကြမ်းမဖက် ခုခံလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ စစ်ကောင်စီ၏ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက လက်နက်မဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေသည့် လူပေါင်း ထောင်ကျော်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ လူပေါင်း (၇၀၀၀) ကျော် မတရားဖမ်းဆီးခြင်း၊ ပြည်သူများ၏ အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖျက်ဆီးခြင်း အစရှိသော အကြမ်းဖက်မှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြပြီး တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် စစ်ဆင်ရေးများ ပြုလုပ်ကာ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြသည်။ တရားမဝင်၊ မအောင်မြင်သည့် အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုက ရှစ်လအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်သော်လည်း စစ်ကောင်စီသည် နိုင်ငံရေးအရ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းမှုကို လုံးဝ စိတ်မဝင်စားပဲ အာဏာဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက် အကြမ်းဖက်မှုများကို ဆက်လက် ကျူးလွန်သွားမည်မှာ သေချာလျက်ရှိသည်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အစိုးရတစ်ရပ်အနေဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နှင့် လုံခြုံမှုတို့ကို အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် တိုင်းပြည်အား တည်ငြိမ်မှုကို ဆောင်ကျဉ်းပေးရန် အလေးအနက် တာဝန်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ခုနှစ်လအတွင်း နိုင်ငံရေးနှင့် သံတမန်ရေး ကြိုးပမ်းမှုသက်သက်ဖြင့် ပြဿနာများကို မဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း သေချာခဲ့သည့်နောက်တွင် မိမိတို့ဒေသ ရပ်ရွာများကို စစ်ကောင်စီတပ်များ၏ ဖိနှိပ် ရက်စက်မှုများမှ ကာကွယ်ရန် အဆိုပါ ရပ်ရွာဒေသမှ ပြည်သူများက ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကို မလွှဲမရှောင်သာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ရသည်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ ဂျီနီဗာသဘောတူညီချက်တို့နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများကို လေးစားလိုက်နာရန် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်း အတည်ပြုပါသည်။ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံး၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာကို လက်ခံထားပြီး မြန်မာပြည်တွင်းရှိ သက်ဆိုင်သူအားလုံး မိမိတို့လုပ်ရပ်များအတွက် ရောမသဘောတူညီချက် နှင့်အညီ တာဝန်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် ပြည်တွင်းစစ်နှင့် လက်ရှိအကြပ်အတည်းများ၏ အခြေခံ အကြောင်းတရားဖြစ်သော စစ်ကောင်စီကို ဖယ်ရှားရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များသည် အနာဂတ်တွင်အကောင်အထည်ဖေါ်မည့် လုံခြုံရေးကဏ္ဍ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာသော၊ ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်သော ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးတွင် အရေးကြီးသည့် အခန်း ကဏ္ဍမှ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု၏ အရပ်သားအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် အမှုထမ်းမည် ဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် စစ်ကောင်စီ၏ တပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့် မိမိတို့တာဝန်များကို စွန့်ခွာ၍ ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအင်အားစုများနှင့် ပူးပေါင်းရန် အခွင့်အရေး ရှိကြောင်း အသိပေးလိုသည်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရက တပ်မတော်သားများနှင့် ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များအား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှင့် ပြည်သူ များအား ပူးပေါင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပူးပေါင်းလာသူများနှင့် ၎င်းတို့ မိသားစုများ၏ လုံခြုံရေးကို အာမခံပြီး တာဝန်ဆက်လက် ထမ်းဆောင်လို ပါကလည်း စီမံဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် တရားဝင်အစိုးရတစ်ရပ်အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု များစွာကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကာ မိမိတို့ ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာဥပဒေများကို ဆက်လက်လေးစားလိုက်နာသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း တဖက်တွင် နိုင်ငံအချို့၏ တရားဝင် ဖိတ်ကြားမှုဖြင့် စစ်ကောင်စီက အချို့သော နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး များတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရနေရပြီး အချို့နိုင်ငံများနှင့် စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး သဘောတူညီချက်များပင် ရရှိနေကြောင်း တွေ့ရသောကြောင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ၏ ပြည်သူများ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသည့် တစ်ခုတည်းသော တရားဝင်အစိုးရဖြစ်မှုကို ထိခိုက်မှုများရှိလာကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထို့ပြင် ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အေဂျင်စီ များ၏ ပြည်သူ လူထုအတွက် ကျန်းမာရေး အကူအညီများ ပေးအပ်ရန် ကြိုးပမ်းချက်များကို စစ်ကောင်စီက ငြင်းပယ်ခဲ့ သောကြောင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြင့် မသေသင့်ပဲ လူပေါင်းများစွာ သေကြေပျက်စီးခဲ့ရပြီး ဒေသတွင်း၌လည်း မတည်ငြိမ်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြပ်အတည်းများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရသည်။ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကိုယ်စား ကြားဝင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်နှင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှသော စစ်ကောင်စီ၏ တိုက်ခိုက်မှုများမှ မြန်မာပြည်သူလူထုအား ကူညီကာကွယ်ပေးရန် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကို အားကိုး၍မရတော့ပါ။ ပြီးခဲ့သည့် ခုနှစ်လတာ ကာလကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါက တမျိုးသားလုံး စုစည်းညီညွတ်မှု၊ စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တို့ဖြင့်သာလျှင် စစ်ကောင်စီကြောင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုနှင့် မတည်ငြိမ်မှုများကို အဆုံးသတ်နိုင် လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိသာထင်ရှား နေပြီဖြစ်သည်။ ပြည်သူလူထုက စစ်ကောင်စီအား ဆက်လက်ခုခံတွန်းလှန်နေချိန်တွင် စစ်ကောင်စီ၏ အကြမ်းဖက်မှုများ ပိုမို မြင့်တက်လာနိုင်ခြင်းကို ရှောင်လွှဲ၍ရမည် မဟုတ်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုများကို သေစေနိုင်သော လက်နက်များဖြင့် အလွန်အမင်း အင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့မှုများက လူငယ်များကို ရရာအင်အားသုံး၍ မိမိကိုယ်ကိုခုခံရန် တွန်းပို့ခဲ့သည်။ ပြည်သူများ က နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ခုခံရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး ခုခံ တွန်းလှန်မှုများကို စတင်နေကြပြီဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အင်အားစုများက မိမိတို့နယ်မြေအတွင်း ကျုးကျော် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး ရပ်ရွာများကို တိုက်ခိုက်လာ တော့မည့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များအား ခုခံကာကွယ်ရန် ပြင်ဆင် နေကြပြီဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်လည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အင်အားစုများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသများ အတွင်း အတူပူးပေါင်းလက်တွဲ၍ ခုခံတွန်းလှန်သွားရန် ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက်မှုများ၏ တရားခံဖြစ်သော အာဏာရှင် စစ်ကောင်စီအား အမြစ်ပြတ် ခုခံတွန်းလှန် သွားရန်နှင့် ပြည်သူလူထုအားလုံး၏ ညီမျှမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ အားလုံးပါဝင်မှုနှင့် ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများအား အပြည့်အဝ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မည့် ငြိမ်းချမ်းသော ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရန် အတွက် ပြည်သူ တရပ်လုံးက စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ကြပါရန် တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သော တရားဝင်အစိုးရတစ်ရပ် အနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြုပေးရန် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုလည်း ထပ်မံတိုက်တွန်းပါသည်။ သို့မှသာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာပြည်သူလူထု၏ တောင်းဆိုမှုကို လေးစားလိုက်နာပြီး စစ်ကောင်စီ၏ အကြမ်းဖက်မှုများမှ အကာအကွယ်ပေးရမည့် လိုအပ်ချက်ကို တုန့်ပြန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရသည် ပြည်သူများကို အကာအကွယ်ပေးရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားနှင့် အခွင့်အရေးအား ကောင်းစွာ အသိအမှတ်ပြု လက်ခံထားပါသည်။
ပြည်သူ့ရင်ခွင် ခိုလှုံသူတွေ ဘယ်ကအဆက်သွယ်ရကြလဲ?
11 September 2021 သတင်း
ဒီလမှာ "ပြည်သူ့ရင်ခွင် - People's Embrace" အဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်လာကြတဲ့ တပ်မတော်သားနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၀၀ခန့်ကို ဘယ်က အဆက်အသွယ်စရပါလဲ မေးကြည့်တဲ့အခါ ဖြေကြတဲ့ အဖြေတွေဖြစ်ပါတယ်။◼️၃၂.၇ ရာခိုင်နှုန်းက အရှေ့က CDM လုပ်သွားတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ညွှန်းပေးလို့◼️၂၄ ရာခိုင်နှုန်းက ပြည်သူ့ရင်ခွင် - People's Embrace Facebook page ရဲ့ ပို့စ်တွေက တစ်ဆင့်◼️၂၂.၃ ရာခိုင်နှုန်းက NUG၊ MOD၊ CRPH အစရှိတဲ့ အစိုးရရဲ့ တရားဝင်စာမျက်နှာတွေက တစ်ဆင့်◼️၁၁.၈ ရာခိုင်နှုန်းက သတင်းမီဒီယာတွေဆီက◼️၄.၆ ရာခိုင်နှုန်းက အခြား (လူသိများတဲ့ တပ်နဲ့ရဲ CDMများ၊ Facebook Group များ စသဖြင့်)◼️၃.၅ ရာခိုင်နှုန်းက Follower များသူ Social Influencer တွေဆီက◼️၁ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ Myanmar Police CDM Channel က တစ်ဆင့် သိကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ CDM လုပ်ထားသူ၊ တပ်နဲ့ရဲက ထွက်လာပြီးသူတွေအနေနဲ့ လုံခြုံရာမှာ ရှိနေကြရင် အထဲမှာ ကျန်ခဲ့သူတွေကို လက်တို့ပေးကြပါဦး။ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း မိမိတို့နီးစပ်ရာက ပြည်သူ့ရင်ခွင် ခိုလှုံချင်သူတွေကို ကူညီပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်အောင် "ပြည်သူ့ရင်ခွင် - People's Embrace" Facebook စာမျက်နှာက ပို့စ်တွေကို shareပေးကြပါဦးလို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။◼️"ပြည်သူ့ရင်ခွင် - People's Embrace" သည် ပြည်သူ့မှ ပြည်သူသို့မူဝါဒဖြင့် ပြည်သူများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် လွတ်လပ်သော အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး တပ်နှင့်ရဲ CDM တို့ကို တတ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတို့ဖြင့် အဘက်ဘက်မှ ထောက်ကူနေသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ တပ်နှင့်ရဲ CDM များအတွက် မူဝါဒဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်းများအပါအဝင် CDM ကုဒ်ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို "ပြည်သူ့ရင်ခွင် - People's Embrace" တစ်ဖွဲ့တည်းကသာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန Ministry of Defence - National Unity Government of Myanmar နှင့်ပူးပေါင်း၍ စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပြည်သူ့ရင်ခွင်အဖွဲ့ကို MyanmarPeople Telegram မှ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
09 September 2021 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://nugmyanmar.org“(၈၂) နှစ်မြောက် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ တွင် ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ”စက်တင်ဘာ (၉) ရက် ၊၂၀၂၁ ခုနှစ်• မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး အတွက်သာမက အာရှတိုက် တစ်ခုလုံး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ဦးဆောင်လမ်းပြခဲ့သူ “ရခိုင့်သူရဲကောင်း ၊ မြန်မာ့သူရဲကောင်းအဖြစ်သာမက အာရှနေဝန်းနီ အဖြစ်တင်စားခဲ့ရသည့် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၏ သတ္တိဂုဏ်တို့ကို အထူးအောက်မေ့လျက် သဝဏ်လွှာပေးပို့ ပါသည်။ • နယ်ချဲ့ဝါဒ မှ လွတ်မြောက်ရန်နှင့် တရားမျှတခြင်း၊ တန်းတူညီမှျခြင်းတို့ အတွက် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ အပါအဝင် လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်များ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ရုန်းကန်တော်လှန်ခဲ့ကြသည်။• ယနေ့မျက်မှောက်ကာလတွင်လည်း အချူပ်အခြာအာဏာ၏ မူလပိုင်ရှင် ပြည်သူတို့ မျှော်ရည်သည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးနှင့် အခြေခံ လွတ်လပ်ခြင်း ၊ မျှတခြင်း ၊ တန်းတူညီမျှခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တို့ကို အာမခံနိုင်မည့် နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ရပ် ထူထောင်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သည်။ • နယ်ချဲ့စနစ်သည် နိုင်ငံများ၏ လွတ်လပ်ရေး တန်းတူညီမှျရေးအတွက် ဘုံအန္တရာယ် အတားအဆီးဖြစ်သကဲ့သို့ ၊ စစ်အာဏာရှင် စနစ်အပါအဝင် အာဏာရှင်စနစ် ဟူသမျှသည်လည်း ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောင်ရေး အတွက် အဓိက ဘုံအန္တရာယ်အတားအဆီးပင်ဖြစ်သည်။ • လက်နက်အားကိုး စစ်အာဏာရှင် ဓလေ့စရိုက်တို့ ဖြင့် နိုင်ငံရေး ၊ လူမှုရေး ၊ စီးပွားရေး အစရှိသည် ကဏ္ဍစုံတွင် ဗိုလ်ကျစိုးမိုးလျက် ပြည်ထောင်စုသားတို့အား ဖိနှိပ်လျက်ရှိသည့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား အမြစ်ဖြတ် ချေမှုန်းရေးသည် မျက်မှောက်ခေတ် ၏ နိုင်ငံရေး တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်ပေသည်။ • အဆိုပါတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် ဆရာတော် အသျှင်ဥတ္တမ ၏ ရဲ့ရင့်မှု ၊ ဉာဏ်ပညာတို့ နှင့် ပြည့်စုံသည် သတ္တိဂုဏ် တို့ကိုပြန်လည် အမှတ်ရလျက် ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် (၈၂) နှစ်မြောက် အာရှနေဝန်းလွတ်လပ်ရေးမီးရှူးတန်ဆောင် ဆရာတော် အသျှင်ဥတ္တမနေ့ကို ဂုဏ်ပြု လိုက်ရပါသည်။
Emergency Speech to the Public on Current Military Crisis
07 September 2021 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
Acting President of the National Unity Government of Myanmar, Duwa Lashi La'sEmergency Speech to the Public on Current Military Crisis Date: September 7, 2021 All the people who live in the Republic Union of MyanmarOn February 1, 2021, the military terrorist group led by Min Aung Hlaing stagedacoup from the democratic government elected by the people and formedadictatorial military council. Following the coup, the people have not passedaday with joy. It has been eight months since the military continuously and cruelly murdered, tortured, detained, and imprisoned using many laws. Now the entire world knows that the military is constantly committing inhumane war crimes by occupying public housings, religious buildings, hospitals, and schools; threatening, arresting, and killing people; ransacking and robbing private properties, and burning villages.Although the people have tried to tolerate it with religious faith, as it has not come to fruition, the people now have used various means of defense against military terrorists. Therefore, with the responsibility to protect the life and properties of the people, the National Unity Government declares as follows;(1) Today, from7September 2021,2TAWTHALIN 1383, we launchedapeople's defensive revolution against the military junta. As this isapublic revolution, all the citizens within entire Myanmar, revolt against the rule of the military terrorists led by Min Aung Hlaing in every comer of the country.(2) People's Defense Forces, target to control the military junta and its assets in your respective areas.(3) All the military-appointed administrators at different levels of administration, immediately leave your positions.(4) All People's Defense Force, carefully protect the lives and properties of the people.Follow the instructions exactly (that comes from the authorities). Precisely observe all the military codes and conducts prescribed by the People's Defense Force.(5) People's Security Forces, arrange to protect the safety of the lives and properties of the people in your respective villages and towns.(6) All Citizens, avoid unnecessary traveling and mind your personal safety. Save necessary supplies and medications. Assist and protect the people's defense forces and their allies. Timely report the movement of the military council to the PDFs. (7) All Ethnic Armed Organizations immediately attacked the Min Aung Hlaing and the military council with different forms. Fully control your lands.(8) Attack and abolish the dictatorship and military administration with people power. At the same time, closely consult with the people and manage to change into civilian administration.(9) All the Border Guard Forces (BGF) and all the militias being deceived by the junta!From now on, join with the people and attack the people's enemy.(10) This revolution isajust revolution;anecessary revolution for buildingapeaceful country and an establishment ofafederal union.(11) I believe that our neighboring countries, ASEAN Countries, United Nations, and all other countries around the world understand that we do it out of necessity based on the country's current situation.(12) As the people's revolution begins, all the soldiers, the police forces, and civil servants who have been deceived and suppressed by Min Aung Hlaing, immediately join with the People's Defense Forces, and immediately report to the Ministry of Defense and Ministry of Home Affairs of the National Unity Government.(13) From today onward, all the civil servants under the military council, we warn and forbid you from going to the office.(14) We will recognize all those who sacrifice their lives and possessions in this revolution as the country's heroes and heroines.We have to initiateanationwide uprising in every village, town, and city in the entire country at the same time. Based on people's unity, creativity, intelligence, passion, and persistence, the revolution period will last shorter.We will remove Min Aung Hlaing and uproot dictatorship from Myanmar for good and be able to establishapeaceful federal democratic union that fully safeguards equality and is long• aspired by all the citizens. Only then, the Union of Myanmar will again becomeaproud nation in the world.Our revolution shall triumph! Duwa Lashi LaActing PresidentNational Unity GovernmentUnion of the Republic of Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်https://nugmyanmar.orgအမိန့်ညွှန်ကြားချက် အမှတ်(၁/၂၀၂၁)၇ စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၁“ရက်အကန့်အသတ်မရှိ အလုပ်ပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း”၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် ၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ စတင်၍ စစ်ကောင်စီသည် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို လက်နက်အားကိုးဖြင့် အဓမ္မ လုယုသိမ်းပိုက်ထားရုံမက ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ထိပါး အကြမ်းဖက် အန္တရာယ်ပြုလျက်ရှိခြင်း၊ ပြည်သူများကလည်း နည်းလမ်းစုံဖြင့် စစ်အာဏာရှင်အုပ်စိုးမှုအား ခုခံတွန်းလှန်လျက် ရှိခြင်း၊ ယခုအခါ တရားမဝင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား တစ်ခုလုံးကို အပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းပစ်ရန် လိုအပ်လာခြင်း ဟူသော ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည့် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် ယနေ့ ၂၀၂၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်မှ စတင်၍ နိုင်ငံတော်အား အရေးပေါ်အခြေအနေ အဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း အမိန့်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြီး ဖြစ်သည်။၂။ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် စစ်ကောင်စီ၏ လက်အောက်ခံ ဖြစ်လျက်ရှိသော အရပ်ဘက် ရုံးဌာနအားလုံးကို ယနေ့မှ စတင်၍ ရက်အကန့်အသတ်မရှိ အလုပ်ပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်းနှင့် အလုပ်ဆင်းရန် မလိုအပ်ကြောင်း ညွှန်ကြားလိုက်သည်။မန်းဝင်းခိုင်သန်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်https://nugmyanmar.orgအမိန့်ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၁)၇ စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၁“အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာခြင်း”၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် ၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ စတင်၍ စစ်ကောင်စီသည် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို လက်နက်အားကိုးဖြင့် အဓမ္မလုယူသိမ်းပိုက်ထားရုံမက ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ထိပါး အကြမ်းဖက် အန္တရာယ်ပြုလျက်ရှိခြင်း၊ ပြည်သူများကလည်း နည်းလမ်းစုံဖြင့် စစ်အာဏာရှင်အုပ်စိုးမှုအား ခုခံတွန်းလှန်လျက်ရှိခြင်း၊ ယခုအခါ တရားမဝင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား တစ်ခုလုံးကို အပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းပစ်ရန် လိုအပ်လာခြင်း ဟူသော ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည့် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် ယနေ့ ၂၀၂၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်မှ စတင်၍ နိုင်ငံတော်အား အရေးပေါ် အခြေအနေအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။၂။ အရေးပေါ်အခြေအနေ သက်ရောက်သည့်နယ်မြေသည် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံး ဖြစ်ပြီး၊ အချိန်ကာလအားဖြင့် ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်သည့် အချိန်အထိ သတ်မှတ်သည်။ဒူဝါလရှီးလယာယီသမ္မတအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်။